Ma ka fekeraysaa inaad aado Yurub?
Ha iibsanin ballanqaadyo been ah - xogogaal u noqo tahriibinta dadka. Tahriibinta dadku waxay horseedi kartaa ka ganacsiga, gumeysiga ama dhimashada dadka.
English العربية Somaali دری
Sannadkan, ugu yaraan 3,000 oo muhaajir ayaa ku haligmay ama lagu waayey intii ay ka gudbayeen Badda Midhatareeniyaanka ee u dhexeysa Afrika iyo Yurub.
Intii u dhexeysay 2014 – 2016 ugu yaraan 10,000 oo muhaajir ayaa ku halaagmay ama la waayey intii ay ka gudbayeen Badda Midhatareeniyaanka.
Muhaajiriinta intooda badan waxa lagu qaadaa doonyo la afuufay (doonyaha bambiirada laga sameeyey). Doonyahan waa la buux-dhaafiyaa; tusaale ahaana 30 ilaa 40 qof ayaa la saaraa doon dhererkeedu yahay 10 mitir oo kaliya.
Halista dhimashada inta socdaalka lagu jiro way sarraysaa. Mukhalasiintu kama qaybqaataan safarka – sida caadiga ahna lacagtooda waxay qaataan kahor intuusan safarku bilaaban.
Tahriibinta dadku ma ahan khayri ama caawin- waa ganacsi faa’iido badan. Sanadkii hore dakhliga dambiilenimo ee tahriibintu wuxuu ahaa qiyaastii ku dhowaad 5.5 bilyan doolar.
Waxana la qiyaasaa inay jiraan qiyaastii 40,000 oo mukhalasiin ah caalamka.
Waqtigan lagu jiro inta badan tahriibinta dadka waxa wada kooxo dambiilayaal ah oo abaabulan kana raadinaya fursado dhaqaale meelaha dadku ka soo safrayaan.
Mukhalasiinta, tahriibinta dadku waxay u noqon kartaa ganacsi faa’iido badan oo kaabaya dambiyada kale ee laga yaabo inay ku jiraan sida gudbinta hubka sharci darada ah iyo maan-dooriyeyaasha, dhaca hantida dadka iyo sameynta dokumintiyada been abuurka ah.
Muhaajiriinta aan awoodin inay siiyaan lacagta safarkooda oo buuxda mukhalasiinta waxa dhici karta in lagu khasbo inay shaqeeyaan inta wareejintoodu socoto. Shaqada khasabka ah waxa dhici karta inay socoto toddobaadyo ama xiitaa bilo.
Muhaajiriinta nugul sida haweenka, carruurta iyo dadka saboolka ah waxay halis ugu jiraan gumeysi iyo noqoshada dhibbanayaal shaqaalaha la khasbo, loona geysto xadgudub iyo gabboodfal galmeed. Sidoo kale waxa dhici karta in lagu khasbo inay dambi galaan sida xatooyo ama tahriibin maandooriye.
Carruurta la socdaalaya walaalahood ama waalidiintood mararka qaar waa laga kaxeeya qoysaskooda intuusan safarku bilaaban. Guud ahaan 10,000 oo carruur muhaajiriin ah ayaa lagu waayey kadib socdaalkooda Yurub.
Kadib markii xuduudaha ka gudubkooda la adkeeyey malaayiin qof ayaa ku xaniban xeryo qaxooti bilo. Xerooyinka sida badan ma laha cunto, biyo iyo daawo ku filan.
Marka la eego qofka magangalyo doonka ah, codsiga magangalyadu wuxuu qaadan karaa bilo lamana hubo in qofka qaxooti loo aqoonsanayo iyo in kale. Haddii qofka aan qaxooti loo aqoonsanin waxay ku dambeyn kartaa musaafurin.